Isikhwama esihle sizovuselela isithombe, kuyoba ngukumama okuphumelelayo kanye nesibonakaliso senkampani yakho - uma uthola imodeli efanele. Uthini? Ochwepheshe bakhuluma ngezinsiza ezifanele ukunakwa.
Isikhwama esikhangayo singumngane ovamile wansuku zonke yanoma yimuphi intombazane: ingaba kalula imibhalo, amagajethi, i-trivia ye-cosmetic, ibhokisi lesidlo sasemini kanye nezingubo ezithintekayo zokuqina. Izimpawu zesikhwama sezintambo zasemadolobheni-2018: ukuklama laconi, isikhumba se-matte noma isikhumba, isakhiwo se-geometri, i-pallet ephawulekayo yombala. Khetha i-tout noma i-trapezium yobumnyama obuhlaza okwesibhakabhaka, ushokoledi, ithusi, iwayini, oluhlaza okwenziwe. Ingabe ukhetha ama-classic? Okukhethile kuyinkimbinkimbi kumbala anthracite-black noma pastel.
Izikhwama ezintathu eziwusizo - isisekelo se-Kazehal-image
Izikhwama ezinemibala eminingi
Imikhiqizo yemibala yebhola - ukukhanya okuqhakazile kwenkathi entsha: kunconywa ngabaqambi kulabo abafuna ukwakha isithombe esenziwe ngesitayela nesinembile. Hlaziya ikhabethe lakho: uma liqukethe izinto ezingaqondakali, izikhwama ezinokufaka okungafaniyo yilokho okudingayo. Ukuhleka okhethekile ukusekela iphalethi yombala wezinsiza ngezingubo ezintsha eziningana ngethoni.
Amasaka ombala wembala - ama-fashionistas abathandayo
Isikhwama se-compact esinamahlombe amade yisikhwama esibalulekile sengubo yabesifazane besimanje. Zonke izinto ezincane ezidingekayo zihlale zikhona: isikhwama, ifoni, izinkinobho, i-lip icwecwe. Uma usuvele unesikhwama esiwusizo, yenza okuthandayo kwi-crossbodies emfashini - ingahlotshwa nge-appliqués, ameva, i-glitter, amaphethini wembali noma imihlobiso engabonakali.
Izithunywa zangasese zangempela: esebenzayo futhi ezithakazelisayo
Ubisi lwe-jelly ne-izaqathe
Indlela yokwandisa amehlo akho nge-makeup: 5 amaqhinga asebenzayo